China Jiaoyisan Pr-75 additive Disperant Series mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Ukwakhiwa: Umxube wesinyithi osekwe kwisepha.
Inkangeleko: amhlophe / amthubi amasuntswana ansundu.
Ukugcina ixesha elimiselweyo: Imveliso iya kugcinwa kwindawo yokugcina umoya, eyomileyo nengonakalisiyo kangangeminyaka emibini.
Packaging: upakisho oluphindwe kabini lweengxowa zeplastiki kunye neengxowa zephepha ezilukiweyo
Ukusinda okushiyekile: 25 kg / ingxowa.
1.Inganciphisa i-Mooney viscosity ye-rubber compound, ukuphucula ukusabalalisa kwekhabhoni emnyama kunye ne-arhente ye-compound, kwaye unike i-rubber compound kunye nepropati efanelekileyo yokutshisa ukhuseleko; Isetyenziswa ekuxubeni ikhomputha yerabha, ukuqengqeleka nokucinezela ngaphandle, ukuvuthisa kunye namanye amanqanaba okulungisa angadlala indima yokwenziwa; Inani elincinci lokongezwa linokusombulula uthotho lweengxaki zobuchwephesha ezinje ngokuxubana okungalinganiyo, imingxunya yomoya kwicandelo elicinezelweyo, ukunqongophala kweglu kwiimveliso ezigqityiweyo, iipateni ezingacacanga njalo njalo. Umgubo weglue PR-75 awuchaphazeli isalathiso sepropathi ebonakalayo njengokuqhekeka kwamandla, ukuqina okungapheliyo, ubulukhuni, ukomelela, njl njl. ukulungisa ifomula. I-Glue powder PR-75 inokunciphisa umthwalo ophezulu okhoyo ngexesha lokuxuba nokukhusela izixhobo.
2. Inokonyusa isantya sokushicilela ukuphuma kwirabha nge-15% -20%, ukunciphisa ubushushu bokushicilela ngaphandle kwento yerabha malunga ne-10 ℃, kwaye inokhuseleko olulungileyo lokuphuma. Inokunciphisa okanye isuse imingxunya yomoya yecandelo elicinezelweyo kunye nokuphucula ukuxinana kwemveliso. Ukunciphisa izinga ukubuya yerabha self-nesalfure yerabha ukuqinisekisa uzinzo ubungakanani kunye nomgangatho iindawo extruded. Ukucofa ukutya okubandayo ngaphandle, umphumo ungcono.
3. Inokuphucula ubumanzi bezinto zerabha, ukuze iimveliso ezixutyiweyo zingasweli irabha kwaye zibe neepateni ezicacileyo. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zerabha ezinje ngamatayara, iityhubhu zerabha, iiteyiphu zokubambelela, njl., Ngakumbi kwimveliso yerabha yenaliti. Kuba ifuthe kwiipropathi zerabha ezibonakalayo nezomatshini zincinci kuneemveliso ezifanayo, ifomula yentsusa ayifuni kutshintshwa ngokubanzi.
Yongeza kunye nezinto ezincinci ngexesha lokuxuba. Kufanelekile ngokukodwa kwinkqubo yokuxuba umva.
1, 1.5-2.5% yerabha ekrwada yerabha ekrwada kufuneka ibe ngamaxesha amabini edosi ngokubanzi
2. Ubungakanani bekhabhoni emnyama buxhomekeke kumphezulu womhlaba:
Umthamo we-N220 kunye ne-N330 ngu-3.0 1%
Umthamo we-N550, N660 kunye no-N762 ngu-2.5 1%
Uhlobo lweRubber olusebenzayo
Irabha yendalo (i-NR), i-Butyl Rubber (IIR), irabha ye-butadiene (i-BR), i-Styrene-Butadiene Rubber (SBR), i-Isoprene Rubber (IR), irabha ye-neoprene CR), i-EPDM, irabha ye-polyethylene irabha (CSM), iFluororubber (FKM) , irabha erisayikilishiweyo, njl. inokusetyenziswa kumavili kunye nezinye izinto zokubumba kunye neemveliso ze-extrusion.
Egqithileyo ICarbopol 2020
Okulandelayo: I-Jiaoyisan Pr-85 Uthotho oludibeneyo lokuhambisa